Global Voices teny Malagasy » Ejipta : Kianjan’ny fahafahana, andron’ny fahafahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Febroary 2011 8:21 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika Lila
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vaovao Mafana, Vonjy Voina
Anisan'ireo lahatsoratra navoakanay manokana momba ny Fanoherana tany Ejipta 2011  ity.
IlayEjiptiana mpihira sady mpitoraka bilaogy, Nadya Shanab, nitantara ny fiantraikan'ny kabary sy ny fanambarana nataon'ny tafika tamin'ireo vahoaka nihaino .
Toy ny mamaly ny fanontanian'i Amr Ezzat i Raafotology ary nanapa-kevitra ny hamaly azy ao amin'ny bilaoginy .
Tena feno tanteraka ny kianja Tahrir araka ny efa nanampoizan'i Amr azy, araka ny fitantaran'i Tarek, kanefa nangina be tsy tahaka ny isan'andro ny vahoaka teny. Nijanona fotoana vitsivitsy teny aho ary avy eo nanapa-kevitra ny handeha hody. Mandalo eo amin'ny Maspiro ny làlako. Nisy olona mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy koa teo, tsapako ny fahadisoam-panantenany noho ny tsy nahatrarany ny tanjona niriany, dia ny hanongana ny fitondrana izany. Afaka kelikely, teny an-dàlana mankany an-trano, dia henoko tao amin'ny radio nolalovako fa voatery nametra-pialana i Moubarak. Tsy nino avy hatrany aho. Nihazakazaka nody aho ary avy hatrany dia nijery ny vaovao rehetra tamin'ny fahitalavitra, tamin'ny twitter , sy ny bilaogy araka izay tratrako.
Feno fifaliana be ny tontolon'ny bilaogy ejiptiana, ary samy neneho izany tamin'ny fombany daholo ny tsirairay. Ny sasany, toy ny Egyptian-Wish, nirehareha tamin'ny zava-bitany ary faly hiatrika ny ho avy .
Ny hafa tahaka an'i Zeinobia tsy nahitana teny firy .
Ny hafa toa an-dry Mohaly, ankoatry ny fampijaliana sy ny kolikoly, dia nino tanteraka fa ho to ny nofinofiny indray andro any .
Ary ny sasany toa an'i Raafatology mbola tsy mino ihany .
Rehefa avy eo, araka ny fitantaran'i Tarek Amr, dia nanapa-kevitra ny hiverina eny amin'ny kianja Tahrir aho, amin'ity faharoa ity kosa dia mba handray anjara amin'ny fety. Vao nivoaka fotsiny anefa aho, dia hitako fa tsy hiandry ho tonga eny amin'ny kianja Tahrir akory vao hahita fifaliana, satria hitako avy any an-tranoko izay miala kilometatra maromaro avy eo ny zava-miseho. teny an-dalana rehetra teny mandrapaha-tongako teny amin'ny kianja Tahrir, mihirahira ny olona, mandihy ary manofahofa sainam-pirenena . Hatramin'izay mantsy dia manao fety tahaka ny eny an-dalambe ny olona rehefa mandresy amin'ny baolina kitra, fa omaly kosa dia olona be dia be no teny an-dalana, tena faly be, ary nanao fety be mihoatra noho ny amin'ny baolina kitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/02/17/12975/
 ny Fanoherana tany Ejipta 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/egypt-protests-2011/
 nitantara ny fiantraikan'ny kabary sy ny fanambarana nataon'ny tafika tamin'ireo vahoaka nihaino: http://nadyashanab.blogspot.com/2011/02/its-been-quite-awhile-since-i-last-made.html
 nanapa-kevitra ny hamaly azy ao amin'ny bilaoginy: http://mabadali.blogspot.com/2011/02/blog-post_11.html
 nirehareha tamin'ny zava-bitany ary faly hiatrika ny ho avy: http://egyptianwish.blogspot.com/2011/02/blog-post_11.html
 tsy nahitana teny firy: http://egyptianchronicles.blogspot.com/2011/02/after-stepping-down-announcement.html
 dia nino tanteraka fa ho to ny nofinofiny indray andro any: http://mohaly.blogspot.com/2011/02/253-being-egyptian-20.html
 Raafatology mbola tsy mino ihany: http://www.raafatology.com/2011/02/we-have-ex-president.html
 mihirahira ny olona, mandihy ary manofahofa sainam-pirenena: https://globalvoicesonline.org/2011/02/12/egypt-the-moment-of-triumph/